ဂန္ထဝင်အီတလီ Meringue Buttercream - Sugar Geek Show - Frosting နှင့်အေးခဲခြင်း
အီတလီ Meringue Buttercream
ဂန္တ ၀ က်အီတလီ meringue buttercream ပြုလုပ်နည်း
အီတလီ meringue buttercream (IMBC) သကြားရည်နှင့်ထောပတ်နူးညံ့သည့်ကြက်ဥလူဖြူများဖြင့်ရိုက်နှက်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအထူနှင့်အခွံမာသောနှင်းခဲဖြစ်သည်။
အီတလီ meringue buttercream နှင့်ဆင်တူသည် ဆွစ် meringue buttercream သကြားမှအပ (SMBC) သည် ၂၄၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကိုချက်ပြုတ်သည်။ ချက်ပြုတ်ထားသောသကြားရည်သည်ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီးချောမွေ့သော buttercream ကိုရရှိစေသည်။
လူတွေဟာအီတလီ meringue buttercream ကိုနှစ်သက်ကြတယ် အများဆုံးတည်ငြိမ်သော အားလုံး buttercream ၏ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ် အနည်းဆုံးချို ။ ဒါကြောင့်သင်ဟာဖလော်ရီဒါ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ တက္ကဆက်စတဲ့ပူနွေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်မယ်ဆိုရင်အီတလီ meringue ဟာသင့်အတွက်အရမ်းကောင်းပါတယ်။
ရေနံနှင့်အတူစိုထိုင်းသော vanilla မယားစကား
အီတလီ Meringue Buttercream အတွက်ဘာအမျိုးအစားတွေလိုအပ်ပါသလဲ။
လတ်ဆတ်သောကြက်ဥအဖြူ - boxed (pasteurized) ကြက်ဥလူဖြူများကိုမသုံးပါနှင့်၊ ၎င်းတို့သည်တည်ငြိမ်သော buttercream နှင်းခဲခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောခိုင်မာသော meringue ထဲသို့နှင်ထုတ်မည်မဟုတ်ပါ။
သကြား - သင်သကြားဓာတ်ကိုအပူချိန် (၂၄၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်) အထိချက်ပြုတ်ပါ။ ရေအားလုံးအငွေ့ပြန်သွားနိုင်ပြီးသကြားဓာတ်သည်တည်ငြိမ်နေပြီးနှင်းခဲထဲသို့ရောက်သွားစေရန်သေချာပါစေ။
ထောပတ် - နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောထောပတ် (သို့သော်မအရည်ကျိုပါ) ကိုသုံးပြီးသင်၏အအေးခံ meringue ထဲသို့ချောချောမွေ့မွေ့ထည့်သွင်းရန်အသုံးပြုပါ။ ငါ buttercream ၌ရှိသောဆားပမာဏကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ဆားမပါသောထောပတ်ကိုအသုံးပြုလိုသည်။ သတိရပါ၊ သင်အသုံးပြုသည့်ထောပတ်အရည်အသွေးမြင့်မားလေ၊ သင်၏ buttercream ပိုမိုအရသာရှိမည်ကိုသတိရပါ။
ဆားငန် - ဆားအနည်းငယ်ကအီတလီ meringue buttercream ရဲ့အရသာကိုဖော်ထုတ်ပေးတယ်
Vanilla - ကျွန်ုပ်၏အီတလီ meringue buttercream ကိုအရသာခံရန် vanilla အမြောက်အများကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ vanilla beans, emulsions (သို့) freeze- ခြောက်ခြောက်သောအသီးများကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်အီတလီအီတလီ meringue buttercream ဘယ်လိုလုပ်သလဲ
ဒီနေရာမှာအီတလီ meringue buttercream ပြုလုပ်ရန်အဆင့်များ
သင်၏ကြက်ဥအဖြူများကိုသင်၏ stand mixer ၏ပန်းကန်ထဲသို့ချည်းကပ်ထားသည့်ကပ်ထားပါ။
အဖုံးနှင့်ဖုံးအုပ်ပြီးဆူအောင်တည်ပါ။ သကြားဓာတ်အားလုံးဖျက်သိမ်းသွားခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏သကြားဓာတ်ပုံသွင်း။ အသီးမှုန့်ဖြစ်လာစေရန်အဖုံးကို ၅ မိနစ်ခန့်ထားပါ။
အဖုံးကိုဖယ်ရှားပြီးသင်၏သကြားလုံးသာမိုမီတာကိုထည့်ပါ။ သာမိုမီတာ ၂၃၅ ºFအထိမွှေနှောက်ပါကအရောအနှောကိုဆက်ဆက်ပါ
သင်၏ကြက်ဥလူဖြူများကိုအမြင့်ဆုံးသို့အပျော့စားများဖြင့် စတင်၍ စတင်သည်
သင်၏ရည်သည် ၂၄၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိရောက်သောအခါ၊ သင်ရောနှောနေသည့်အရှိန်ကိုအနိမ့်သို့လျှော့ချပြီးသင်၏ပူပြင်းသောရည်တွင်မိုးရေကျပါ။ ရည်ပြန့်ပွားခြင်းမှကာကွယ်ရန်သုတ်ဆေးနှင့်ပန်းကန်လုံး၏ဘေးကြားရှိမိုးရေကိုစမ်းကြည့်ပါ။
မြန်နှုန်းကိုပြန်မြင့်ရန်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အလွန်တောင့်တင်းသောထိပ်များသို့ရိုက်ခြင်း သင် meringue ကိုရောစပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်သင် meringue ကိုအခန်းအပူချိန်အထိအေးစေရန်သင်၏ရောနှောတပ်ဆင်မှု၏အောက်ခြေတွင်ရေခဲအထုပ်များထားပါ။ ၎င်းသည်အလုံအလောက်ခိုင်မာလျှင်၎င်းသည်အေးစေရန် 15 မိနစ်ရေခဲသေတ္တာထဲသို့ထည့်ပါ။
သင်၏ meringue လုံးဝအေးသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက် buttercream သည်အလင်းနှင့်မွှေးပျံ့ထွက်သွားပြီးထောပတ်ကဲ့သို့အရသာမကုန်မချင်းသင်၏ထောပတ်၊ ဆားနှင့် vanilla တို့ကိုသင်ရိုက်နိုင်သည်။
အီတလီ Meringue Buttercream ကိုသင်အရောင်ခြယ်နိုင်ပါသလား။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအစားအစာအရောင်တစ်မျိုးကိုပန်းကန်ထဲထည့်လိုက်ခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ကြာပွတ်နှင့်အရောင်ထည့်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့ buttercream နဲ့လက်ရောစပ်ခြင်းကိုအစားအစာအရောင်အဖြစ်ခွဲနိုင်ပါတယ်။
အီတလီ Buttercream ဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲ။
အီတလီ buttercream ကိုအခန်းအပူချိန်တွင် ၂-၃ ရက်ခန့်ထားနိုင်သည်။ ငါမသုံးရင် ၂၄ နာရီအတွင်းမှာကျန်ရှိနေသေးတဲ့ buttercream ကိုအအေးခန်းထဲမှာထားလေ့ရှိတယ်။ ၎င်းသည် ၆ လနှင့်အထက်အေးခဲနိုင်သည်။ buttercream ကိုအခန်းအပူချိန်သို့ယူဆောင်လာပြီးသင်မသုံးမီချောမွေ့စွာကိုက်ညီသည်အထိပြန်လည်ရိုက်ပါ။
သင်ကြိုးစားချင်သောအခြား buttercream ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဆွစ်ဇာလန် Meringue Buttercream စာရွက်
ချောမွေ့ချောမွေ့သောအီတလီ buttercream သည်၎င်း buttercream အားလုံးထဲတွင်တည်ငြိမ်ဆုံးဖြစ်ပြီးအလွန်ချိုသည်မဟုတ်။ ၎င်းကိုသကြားရည်ပူများကိုကြက်ဥလူဖြူများထဲသို့သွန်းလောင်းခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးနောက်ထောပတ်၊ ဆားနှင့်အရသာတို့ဖြင့်ပြီးစေသည်။ ပြင်ဆင်ချိန် -ဆယ့်ငါး မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၁၀ မိနစ် အအေး:ဆယ့်ငါး မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:၄၀ မိနစ် ကယ်လိုရီ849kcal
▢၁၆ အောင်စ (454 ဆ) သကြားဓာတ်
▢၈ အောင်စ (၂၂၇ ဆ) ရေ
▢1/4 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ဆားငန်
▢၈ ကြီးမားသည် (264 ဆ) ဥအဖြူ
▢၂၄ အောင်စ (680 ဆ) unsalted ထောပတ် ပျော့ပျောင်းသည်
▢နှစ် Tsp vanilla ထုတ်ယူ
မီးဖိုပေါ်၌ရေနှင့်သကြားတို့ကိုအတူတကွရော။ အဖုံးဖြင့်ဖုံးအုပ်။ အလယ်အလတ်မြင့်အပူဖြင့်ဆူအောင်တည်ပါ။
အဖုံးအုပ်ကို ၃-၄ မိနစ်ခန့်ထားကာသကြားဓာတ်များအားလုံးဖျက်သိမ်းနိုင်အောင်ယူဆောင်လာပါ။ သို့မဟုတ်ပါကသင်၏သကြားဓာတ်သည်ခဲယဉ်းပြီးကြည်လင်သွားနိုင်သည်။
အဖုံးကိုဖယ်ရှားပါ၊ သကြားလုံးသာမိုမီတာကိုဂရုတစိုက်ထည့်ပါ။ ရည် ၂၄၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိသည်အလယ်အလတ်အဆင့်တွင်ချက်ပြုတ်ပါ။
သကြားပါ ၀ င်မှုသည် ၂၃၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တွင်ရှိပါကဥအဖြူကိုအမြန်နှုန်းဖြင့်စတင်ရိုက်ပါ။ ကြက်ဥလူဖြူထဲသို့ဆားထည့်ပါ။
ကြက်ဥလူဖြူများသည်ပျော့ပျောင်းသောအဆင့်သို့ရောက်သောအခါမြန်ဆန်သောအနိမ့်အမြင့်တွင်ရောနှောနေစဉ်သုတ်လိမ်းထားသောလူဖြူများသို့သကြားဓာတ်ပါ ၀ င်မှုကိုသွန်းလောင်းပါ။
ကြက်ဥ / သကြားအရောအနှောကိုခိုင်မာသောထိရောက်သည်အထိဆက်ပြီးရိုက်ပါ။ ငါခါးကိုခါးပတ်ကိုရေခဲဘူးနဲ့ပတ်လိုက်တယ်။ ရေခဲသေတ္တာထဲကို ၁၅ မိနစ်ခန့်ထည့်ပြီးမီးဖိုထဲထည့်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးထားနိုင်သည်။
အဆိုပါ meringue အအေးပြီးတာနဲ့ buttercream အလင်းနှင့် fluffy သည်နှင့်ထောပတ်အရသာမရှိတော့သည်အထိပျော့ထောပတ်နှင့် vanilla အတွက်ရိုက်။ ဒီဟာကို ၁၀-၁၅ မိနစ်ကနေယူနိုင်ပါတယ်။ ကြည့်ရတာအခြောက်လှန်းနေပြီးရေစိုနေတယ်ဆိုပါစို့။ ငါကတိပေးအတူတူလာကြလိမ့်မည်။
အရေးကြီးချက် - သင်၏ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်အခန်းအပူချိန်တွင်ရောက်နေပြီးသင်တိုင်းတာရန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအစားထိုးဒီစာရွက်ပျက်ကွက်စေနိုင်သည်။ (စာရွက်၏အောက်ခြေရှိမှတ်စုများကိုကြည့်ပါ) သင်သတိမပြုမိရန်အရေးကြီးသောအရာများ 1. သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုယူလာပါ အခန်းအပူချိန် သင့်ရဲ့ဘက်ထရီပြတ်တောက်မသွားအောင်သို့မဟုတ်နွေးထွေးမှုအနည်းငယ် (ဥများ၊ ထောပတ်နို့၊ ထောပတ်စသည်) ပင်။ 2. မှစကေးကိုသုံးပါ သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအလေးချိန် (အရည်များအပါအ ၀ င်) မဟုတ်ပါကညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိပါ (ဇွန်း၊ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၊ အဖြစ်တော့စသည်) ။ မက်ထရစ်တိုင်းတာမှုစာရွက်ကဒ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အရွယ်အစားပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ခွက်များအသုံးပြုခြင်းထက်ပိုမိုတိကျပြီးသင်၏စာရွက်၏အောင်မြင်မှုကိုသေချာစေသည်။ ၃။ Mise en Place လေ့ကျင့်ပါ။ သင်၏ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုကြိုတင်တိုင်းတာ။ တစ်ခုခုမတော်တဆထွက်ခွာရန်အခွင့်အလမ်းများကိုလျှော့ချရန်သင်မရောစပ်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။